Atletico Madrid oo ku rajo weyn inay 34 milyan oo gini bisha Janaayo ku dhammaystiri doonto saxiixa xiddig ka tirsan Kooxda Barcelona – Gool FM
(Madrid) 15 Nof 2019. Kooxda Atletico Madrid ayaa la soo warinayaa inay kalsooni ku qabto inay dhammaystiri doonto suuqa bisha Janaayo xiddig ka tirsan naadiga Barcelona.
Kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid ayaa ku rajo weyn inay saxiixa laacibka khadka dhexe ee Barcelona, Ivan Rakitic ku dhammaystiri doonto adduun dhan 34 milyan oo gini marka suuqa kala iibsiga xiddiga dib loo furo bisha Janaayo.
Xiddiga xulka qaranka Croatia ayaa ku dhibtooday inuu booska joogtada ah ka helo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedkan, waxaana la la xiriirinayaa inuu isaga tagi doono kooxaha xafidanaysa horyaalka La Liga suuqa kala iibsiga ee Jilaalka.
Kooxaha Juventus, AC Milan iyo Inter Milan ayaa dhammaantood xiiseynaya xiddigan, laakiin Atletico Madrid ayaa sidoo kale ugaasanaysa xiddigii gaaray Final-ka Koobkii Adduunka ee 2018.
Sida ay warinayso majaladda Movistar+ Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Diego Simeone ayaa diyaar u ah inay bixiyaan 34 milyan oo gini oo ay ku doonayaan inay ku soo xero-geliyaan laacibkan khadka dhexe ee qibradda leh bilowga sanadka 2020, waxaana ay ku rajo weyn yihiin inay heshiis kala gaari doonaan arrintaas kooxda ay ku xafiiltamaan horyaalka Spain.
31-sano jirkaan ayaa heshiiskiisa kooxda Catalan waxa uu ku eg yahay illaa xagaaga 2021-ka, waxaana uu u saftay kooxda 10 kulan tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Kaliya hal jeer ayuu khadka dhexe ka soo bilaabay kulammada horyaalka La Liga kal ciyaareedkan, inkastoo uu ahaa badal aan la isticmaalin labadii kulan ee ugu dambeeyay ee kooxdiisu ay la kala ciyaartay Levante iyo Celta Vigo.